Lahatsary fiaramanidina fiaramanidina sy fiaramanidina FS2004 - Rikoooo
Downloads 11 072
Mpanoratra: Death Glider, Stargates, Piglet Conrad
Ireto misy telo mpanafika fiaramanidina. Tena tsara ny hanidina ho an'ireo izay toy izany karazana fiaramanidina. Tena mafy ny hafainganam-pandeha! Maka fahafinaretana ! Modely: Greyshade GSH-01 hita tao amin'ny sarimihetsika Fanafihana ny Clones Star Wars. Fahafatesana Gliders Goa'uld hita ao amin'ny andian-dahatsoratra Stargate. Gerry Anderson ny "Supercar" Supercar ny TV tantara mitohy (1961).